47 Buruka ugare muguruva,+ haiwa iwe mhandara yeBhabhironi.+ Gara pasi pasina chigaro choumambo,+ haiwa iwe mwanasikana wevaKadheya.+ Nokuti vanhu havachazokutizve akatunhidzwa uye akaregererwa.+ 2 Tora guyo+ ukuye furawa. Fukura chifukidziro+ chako. Kwinya nguo yako.+ Fukura gumbo.+ Yambuka nzizi. 3 Ita kuti kusapfeka kwako kuve pachena.+ Uyewo, kuzvidzwa kwako ngakuonekwe.+ Ndichatsiva,+ uye handizovi nomutsa chero nomunhu upi zvake wandinosangana naye. 4 “Kune Mudzikinuri wedu.+ Jehovha wemauto ndiro zita rake,+ Mutsvene waIsraeri.”+ 5 Gara pasi chinyararire,+ upinde murima,+ haiwa iwe mwanasikana wevaKadheya;+ nokuti vanhu havachazokushevedzizve kuti Tenzikadzi+ woUmambo.+ 6 Ndakatsamwira vanhu vangu.+ Ndakasvibisa nhaka yangu,+ ndikavaisa muruoko rwako.+ Hauna kuvanzwira ngoni.+ Wakaita kuti joko rako riremere kwazvo munhu akwegura.+ 7 Wakaramba uchiti: “Ndichava Tenzikadzi+ nokusingagumi, nokusingaperi.” Hauna kuisa zvinhu izvi mumwoyo mako; hauna kuyeuka kuguma kwenyaya yacho.+ 8 Zvino chinzwa izvi, iwe mukadzi anongoda zvokuzvifadza,+ ari kugara akachengeteka, ari kuti mumwoyo make: “Ndini, uye hakuna mumwezve.+ Handizogari ndiri chirikadzi, uye handizozivi kushayikirwa nevana.”+ 9 Asi zvinhu zviviri izvi zvichangoerekana zvakuwira, muzuva rimwe chete:+ kushayikirwa nevana uye kuva chirikadzi. Zvichakuwira zvakayerwa zvakakwana,+ nokuda kwouroyi hwako huzhinji, nokuda kwezvitsinga zvako zvine simba rizere—izvo zvakanyanyisa.+ 10 Wakaramba uchivimba nezvakaipa zvako.+ Wakati: “Hakuna ari kundiona.”+ Uchenjeri hwako nezivo yako+—ndizvo zvakakutsausa; uye unoramba uchiti mumwoyo mako: “Ndini, uye hakuna mumwezve.” 11 Uchawirwa nedambudziko; hauzogoni kuridzivisa nemashiripiti. Uchawirwa nenhamo;+ hauzokwanisi kuidzivisa. Uchangoerekana+ wawirwa nokuparadza kwausina kumboziva. 12 Mira zvino, nezvitsinga zvako uye nouroyi hwako huzhinji,+ zvawakashanda zvakaoma mazviri kubvira uchiri muduku; kuti zvichida ungabatsirwa, kuti zvichida ungatyisidzira vanhu. 13 Wapera simba nokuwanda kwevanokupa mazano. Zvino ngavasimuke, vakuponese, ivo vanonamata matenga, vanotarira nyeredzi,+ vaya vari kupa zivo pakugara kwomwedzi pamusoro pezvinhu zvichakuwira. 14 Tarira! Vaita semashanga.+ Moto uchavapisa.+ Havazonunuri mweya+ yavo pasimba romurazvo wacho.+ Hapazovi nokutsvuka kwemarasha kuti vanhu vadziye, uye hapazovi nechiedza chomoto chokuti vagare pamberi pacho. 15 Izvi ndizvo zvavachava kwauri, vawakashanda navo zvakaoma vachikuitira zvemashiripiti+ kubvira uchiri muduku. Chokwadi vachadzungaira, mumwe nomumwe achienda kunzvimbo yake. Hapazovi neanokuponesa.+